Umbhobho wepayipi omnyama waseMatte Wande
Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / WOWOW Matte Black-Handle Two esakazekile ompompi Bokugeza
WOWOW Matte Black Amabili-Handle Esabanzi Bathroom Bafo
Kulinganiselwe ngo- 4.87 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 23 izilinganiso ikhasimende
Ukuhlanganiswa kwesikhuni kufakwe emnyama matte emnyama, engavikela ingaphezulu ekugqwabeni nasekugqwala.
Amanzi wokucwilisa namanzi wokuhambisa amanzi aqukethwe kunqwaba. Qiniseka ukuthi usebenzisa ukuthengiswa kwensimbi ye-premium kwi-Wellbeing yakho
Ukulawulwa Kwezinga Lokushisa - Izixhumi ezibambo ezibili zokulawula okulula kokushisa kwamanzi nokusakaza kwamanzi ngqo
Ukusetha Okulula - Zonke Izakhi ezilungiselelwe ukufakwa nazo zifakiwe.
2321300B imiyalo yokufaka
Izimbobo ezi-3 Zentaba Yesibaya Sangasese Esisakazekile 2321300B-AMUS: ibanga eliguquguqukayo phakathi kuka-6 '' - 14 ''; Usayizi weHole: 32 - 38 mm / 1.26 - 1.5 ''
I-Creative Quick Connect Technology: kulula ukuyifaka wedwa ngaphandle kwepulangwe, woza nomhlangano we-drain pop. LANDELA UKUZEZA UKUZIPHATHA IZIMALI NGESITOLO SE-WOWOW
I-Black 2-Handle Bath faucet: indawo emnyama ye-matte emnyama, eyingqayizivele futhi elula, imelana nokugqwala futhi ithungathekise ukusetshenziswa kwansuku zonke, ifanela indlu yokuqasha, i-condo, ifulethi, indawo yokugcwala, ukusetshenziswa kwezentengiso, ihotela
I-Basin Faucets engaxutshwe ngaphandle kwe-Basin: i-cartridge ephezulu yokubumba ye-NSF ne-aerator eyonga amanzi ayiqinisekisi ukuvuza nokuhola, okwamanje inikeze ngobumnene, ukugeleza kwamanzi okuzinzile okulawulwa yizibambo ezimbili ngomzamo omncane
UBUDLELWANE BESIKHATHI SEKUPHAKATHI KWESEKHAYA: Kutholwe ngezinsuku ezingama-90 zokubuya kwamahhala nempilo iwaranti! SICELA UXHUMANE EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: I-8 intshi, Black, Hlanganisa
12.1 x 8.6 x amasentimitha angu-3
Ngithengile ompompi beDelta nePhisher ngaphambili ngezindleko ezinkulu. Umkhiqizo we-WOWOW ungaphezulu kakhulu kwalokho engikulindele ngekhwalithi, ubulula bokufakwa kanye nenani lemali yami. Kubukeka kumangalisa kumasinki ami okugeza amasha. Ngisho nokupakisha kusezingeni eliphakeme. Ngithanda ama-o-rings akhelwe ngaphakathi ezansi kwezibambo kanye nompompi ukuvimbela ukuvuza. I-hose yokunamathisela okuguqukayo eza nayo nayo ipulagi futhi idlala ngaphandle kokuvuza. Angikwenzi ukubuyekezwa komkhiqizo okuningi kodwa ngigculiseke kakhulu ngalo mkhiqizo ebengicabanga ukuthi ngizohlanganyela nawo.
Muva nje ngilungise kabusha indlu yami yokugezela ebandakanya ukufaka echibini lami lakudala lokugezela kanye nekhabethe ngosinki obushelelezi kodwa othe ngxi. Lokhu kudinga ompompi abasha abasakazekile.
Ngenxa yokulungiswa kabusha, ngangingasenayo isinki yokugezela esebenza. Ngakho-ke, njengoba bengidinga ompompi abasha khona manjalo, ngiseshe izitolo zami zehardware zasendaweni, kubandakanya nezitolo ezinkulu zamaketanga. Ngimangele futhi ngadumala ukuthi, hhayi kuphela ukuthi banokukhetha okulinganiselwe kakhulu kompompi bendawo yokugezela, kepha bonke babiza cishe noma ngaphezulu kwe- $ 100!
Nganquma ukuthi ngingahamba ngaphandle kosinki osebenzayo izinsuku ezimbalwa, futhi ngazizwa ngineqiniso lokuthi ngizoba nokukhetha okungcono kanye nentengo engcono;
Ngithole masisha ompompi abaningi engingakhetha kubo ngenani lentengo eliphansi kakhulu kunalokho ebengikuthole ezitolo zami zasekhaya zokuthuthukisa ikhaya. Ngazinza kulo mhlangano ompompi, futhi ngangingajabuli kakhulu. Oompompi banesiphetho esihle se-nickel, futhi konke kufakiwe ukufakwa, ngaphandle kwamapayipi amafushane angabizi kakhulu adingekayo ukuxhuma emanzini. Nganginomngane ongisizayo ngokulungiswa kabusha, futhi u-ha wafaka ompompi. Kodwa-ke, ngiyaqiniseka ukuthi bengingazenzela mina, ngoba bekunezingxenye ezimbalwa kuphela zokuhlangana, futhi imiyalo ebonisiwe ibiqonde phambili futhi kulula ukuyiqonda futhi iyilandele. Ngithumela isithombe sikasinki wami omusha ompompi abafakiwe futhi abasebenza. Ngincoma kakhulu lo mhlangano wepompo yokugezela osabalele ngokwenziwa kwawo, ithusi elisetshenzisiwe ekukhiqizeni kwalo, ubuhle balo nalokho engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu — kulula ukufakwa.
Esinye isici salo mhlangano wompompi “yisitobha” sosinki. Ivala ngokucindezela phansi kuyo, bese ivula ngokuyiphindisela futhi. Ngikholwa ukuthi lokhu kungukuthuthuka okukhulu kunesitobha sohlobo oludala, esidinga ukuthi usebenzise i-lever ukuyivula nokuyivala. Mhlawumbe yimi ohlukile, kepha angikaze ngibe nolunye uhlobo lwakudala olungazange lusebenze kahle. Eqinisweni, isikhathi esiningi, bengizithola sengiyilahla ngokuphelele. Ngijabule kakhulu ukuba nakho, lokho engicabanga ukuthi kuyikho, isitobha esithuthukisiwe kakhulu. Lokhu kungabonakala njengokuthuthuka okuncane nokungabalulekile kwabanye, kepha kulabo bethu ababhekane nezinkinga zesitobha sohlobo oludala, kuyisici esamukelekile.
Ikhwalithi enhle ngentengo! Isiphetho sibukeka sisihle futhi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sisebenza njengoba kufanele. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende kuhle, idreyini ye-pop up ayisebenzelanga usinki wami (mfushane kakhulu). Ngithumele umthengisi nge-imeyili futhi kungakapheli nemizuzu engu-10 baqhamuka nesisombululo. Bathole ukukhipha okusha okude futhi okufana nokuqedwa / ukwakheka kompompi, bese bangithumelela imali yokubuyisa ukuthenga okusha. khama.
Lawa ngamanye ompompi abahamba phambili engiwathengile, ikakhulukazi kuleli phuzu lentengo. Zinhle, zikanokusho futhi zibukeka zizinhle egumbini lami lokugezela elisanda kulungiswa. Ngisebenzise isethi ebiza kakhulu yokulungisa kabusha isitezi futhi lena ibukeka INGCONO kangcono. Ngokwethembeka, ibukeka futhi isebenza kahle njengeMoen noma iDelta kepha ingaphezu kuka-50% ngaphansi. NGIWUTHANDA kakhulu lo mkhiqizo.
Le ompompi iyamangalisa! Ngenkathi ngenza i-remodel ngakhetha ompompi abambalwa abahlukene e-CHROME ngezindawo zami zokugezela nekhishi. Imvamisa isisho sokuthi uthola okukhokhelayo sithambekele ekubambeni njengeqiniso kepha hhayi kuleli cala. Ngibe nalokhu endlini yami yokugezela ngisebenzisa nsuku zonke izinyanga ezingaphezu kwezingu-6 manje futhi lokhu kuyizinto engizithandayo kakhulu. Angikaze ngibe nezinkinga ngokuvuza, izibambo ezixegayo, ingcindezi yamanzi noma ezinye izikhalazo ezivamile ngompompi. I-cherry ngaphezulu nale ompompi ingabe ayibonisi izindawo zamanzi. Yonke eminye imibhobho yami kufanele ihlanzwe njalo ezinsukwini ezimbalwa ukuze iqhubeke ibukeka isha kodwa hhayi lena. Ngingahamba amasonto amabili nesigamu ngaphandle kokuyisula noma ukuyikhuhla futhi awukwazi nokusho. Ngithandana nale mipompi. Zilingana nompompi wami we-Price Pfister ngokwezinga lekhwalithi kodwa yiwona kuphela ompompi obukeka umuhle ngaso sonke isikhathi.
Ngithathe indawo yompompi wokugezela osezingeni eliphakeme ngalona. Amapayipi wokuxhuma asheshayo enze ukufakwa komoya futhi ngangihlaba umxhwele ngekhwalithi yokwakha nokuthi lokhu kubukeka kukuhle kangakanani kunendala. Bengicabanga ukuthi ngithatha ithuba ngophawu engingakaze ngizwe ngalo kodwa cishe cishe uhhafu wentengo yalokho ebengizokukhokha esitolo esikhulu sehadiwe lokhu bekuyigugu elihle.
Ngiku renti futhi bengingafuni ukuchitha ithani ekushintsheni ompompi ababili ababi enkosini yami. Empeleni ngijabule kakhulu ngalokhu. Ikhwalithi isezingeni eliphezulu futhi ilula kakhulu ukufaka. Njengenjwayelo, kuthatha isikhathi eside ukususa ezindala kunokufaka ezintsha… Imvamisa uhlupheka ngekhwalithi lapho ufuna inani. Isikhathi sizotshela, kepha kuze kube manje lokhu bekumnandi ngemali.
Imvamisa ngisebenzisa kuphela ompompi bezinhlamvu zamagama amakhulu kusikhungo sethu. Kepha ngemuva kokubona izibuyekezo nginqume ukuzama eyodwa.
Ihlatshwe umxhwele kakhulu ikhwalithi yompompi, nokukhululeka kokufakwa. Iyunithi izizwa iqinile, futhi yakhiwe kahle, futhi ukuxhumana bekuklanywe kungagqwali.
Thanda le ompompi !! Ikhwalithi enhle ngentengo enhle. Kubhekwe kwaLowe futhi umpompi ofanayo wawuyi- $ 119 eyodwa. Ngincoma impela!
Bekufanele ngithole ompompi omusha lapho ngilungisa kabusha izindlu zangasese ezincane. Uthande ukubukeka okuhle kwale sethi. Ngiyithengile njengo-MATTE BLACK futhi bengilindele ithoni engathi greyish kancane kodwa lokhu kuhle kakhulu. Zonke ezinye izingxenyekazi zekhompuyutha endlini yokugezela zisondele kulowo mbala ompunga kepha ngingahlala nalokhu. I-remodeler yethu iphawule ukuthi kulula kanjani ukufakwa. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sisebenza ngendlela efanele ngakho ngijabule futhi inani belilungile.
Lompompi benziwe ngumuntu owaziyo abakwenzayo. Zinezimpawu noma ama-gaskets e-mounting entabeni ngayinye ukuvimbela amanzi ukuthi angene. Ukufakwa kulula kakhulu futhi kuyashesha. Izinto zokwakha zisezingeni eliphakeme ngakho-ke azigcini ngokubukeka kahle kepha ngeke zigqwale.
Ngangithengile ompompi bami bangaphambilini esitolo sehardware sendawo ngezindleko eziphakeme kakhulu, kepha bahlala isikhathi esingaphansi kweminyaka emithathu. Kuthe uma ngiyozikhumula ngathola ukuthi inathi igqwalile yaya ku-valve kwadingeka ngiyinqume. Ngokusobala bekungekho uphawu oluhle oluzungeze isisekelo se-valve kanti inadi lenziwe ngezinto ezishibhile ezigqwala. Njengoba yayingaphakathi kwekhabhinethi futhi kunzima ukufika kuyo, lokhu kwathatha amahora.
Kungakho ngajabula kakhulu lapho ngibona indlela le sethi eyayakhiwe ngayo nohlobo lwento abayisebenzisayo ekwakheni.
Le ompompi iphelele! Thanda ukuthi ibukeka kanjani, kulula ukuyifaka, ikhwalithi enkulu yomsebenzi osindayo. Azikho izigxivizo zeminwe. Sithenga nxazonke kepha asifuni ukuchitha u- $ 100 ngakho-ke sithathe ithuba kulokhu futhi sajabula kakhulu ngokuthi senze kanjalo. Ngeke udumazeke.
Ngithathe indawo yompompi wami osuphelelwe yisikhathi ngalokhu. Ngijabule kakhulu! Kubukeka kukuhle futhi bekulula kakhulu ukuzifaka ngokwami ​​!! Ngihlela ukuthenga amanye amabili ukuze ngishintshe amanye ompompi abadala.
Sikhipha ompompi abahlanu bokugezela ababiza imali ephindwe kabili kunalena abenze ngayo. Lezi ziyakhanga, kulula kakhulu ukuzifaka futhi zenziwe kahle kakhulu. Ukuphela kwento okufanele ngiyisho okukuyo noma yini engeyinhle ukuthi imiyalo kufanele ikutshele ukuthi uthenge okokufaka intambo yepayipi ukuze uyisebenzise ezintanjeni zokukhipha amapayipi. Ipayipi lokukhipha amanzi lenzelwe amasinki anembobo echichimayo ngakho-ke kunezimbobo ohlangothini olungaphansi kwesitobha, phakathi kwenathi negasket ezansi. Imicu iyinkambo impela futhi ngithole ukuthi amanzi lapho ekhipha amanzi azophela emigodini echichimayo bese econsa imicu kuphume nati ebambe ipayipi lokukhipha. Ilungiswa kalula nge-sealer yezintambo. Uyalwa ukuthi usebenzise i-plumbers putty lapho umsele uxhuma khona phezulu kosinki, kepha lokho akuwona umthombo wokuvuza. Thola isivalo sentambo. I-IMO, awukwazi ukungahambi kahle ngale mpompi ngentengo!
Futhi amanani entengo ayephansi kuphela ngale mpompi omuhle kakhulu, kwakulula kakhulu ukuyifaka. Ukukhipha i-pop up kuvelele. Ngilindele ukuthi le ompompi ihlale iminyaka. Umpompi ofana nalona ovela kusitini nosimende omkhulu ungabiza imali ephindwe kathathu kunaleli ompompi. Ngincoma kakhulu futhi nakanjani ngizothenga futhi.
Ngikuthengile lokhu ukufaka esikhundleni sompompi oneminyaka engu-25 ubudala. Ukufakwa bekuwumoya ngisho nofaka i-novice DIY njengami. Okuwukuphela kwengxenye enzima ukususwa kompompi wakudala owawugqwalile. Izixhumi ezilula ezinikezwe zenze ukufakwa kwaba yinto engenabuhlungu ikakhulukazi. Isikhalazo kuphela ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu senziwe ngento enesisindo esincane uma iqhathaniswa nompompi wakudala obuyifakile. Umkhiqizo ophelile ubukeka ubushelelezi futhi ubukeka kahle, noma kunjalo.
Kufakwe kubhavu okungasetshenziswa kakhulu ngakho-ke ungabi nakho okuhlangenwe nakho kwempilo kepha iphakethe liphelele ngakho konke okudingayo futhi kusebenza kahle, kubukeka kukuhle. Isitobha siyiphusha yokuvala ucingo kunentonga ejwayelekile yokuphakamisa nokwehlisa isivalo. Angithandani nalokho kodwa iqiniso lilula futhi line-strainer kulo ngakho-ke uma ulahla okuthile emseleni ungadonsela kuyo yonke inhlangano yokumisa uphinde uyithole. Lokho mhlawumbe kuhlanganiswa kakhulu kunokubi kokungabi nayo induku yokuvula / ukuvala isitobha.
Le ompompi ibukeka futhi isebenza kahle endlini yethu yokugezela. Ukufakwa kwakulula ngento eyodwa okufanele uyiqaphele. Amapayipi wokuxhuma asheshayo eza nompompi kufanele ahlaliswe ngokuqinile lapho efakiwe. Bengicabanga ukuthi ngizixhume kahle kodwa kwathi lapho kuvulwa amanzi kwavulwa umpompi, bobabili banqamuka. Ukulungiswa okulula, khumbula nje ukusunduza ngokuqinile lapho unamathisela amapayipi.
Benginenkinga encane ne-aerator ompompi ngathola ukuthi insizakalo yamakhasimende ye-WOWOW iyashesha futhi iyaphendula. Inkampani enhle, ingancoma nakanjani le ompompi.
Ngikutholile nje lokhu ngakufaka. Kwakulula kakhulu ukufaka, ukupakisha okuhle kakhulu nenani le-fir elihle kakhulu. Ngifunde izibuyekezo eziningi ngaphambi kokuthi ngithenge futhi ngingenangqondo. Kuze kube manje akukho ukuvuza futhi kubukeka kukuhle. Uma kukhona okuguqukayo ngizobhala kabusha ukubuyekeza kwami. Futhi, ngokushesha nje lapho ngithola umkhiqizo ngithole i-imeyili evela kumthengisi. Lithe uma kukhona izingqinamba nhlobo kufanele ngixhumane nabo ngqo. Njengoba ngishilo kuze kube manje kuhle kakhulu. Khumbula ukuthi yinani elihle kakhulu lemali.
Siyayithanda le ompompi. Ipulaki yokukhipha inkinobho yokucindezela yinhle kakhulu. Izibambo zijika ngokushelela namanzi ageleza kahle. Ngikuthengele ukulungiswa kabusha kwendawo yokugezela ebengikwenza futhi bengikhathazekile ngokuthenga into enjalo online ngaphandle kokuyibona empeleni. Sekudlule engikulindele. Siyabonga ngomkhiqizo omuhle nesipiliyoni esihle ngalokhu kuthenga.
Ompompi baqedile kahle futhi bahlanganiswe kahle. I-spigot yakhelwe ngokugxila okuhle ngaphezulu kukheshi wosinki. Ukuqoqa kanye nokufaka ngaphansi kompompi kanye nama-spigot kucatshangwe kahle ukuvimbela ukungena kwamanzi. Izinto ezisetshenzisiwe zibonakala zisezingeni eliphakeme. I-pop up drain ne-tailpiece, ngenkathi ingenamandla kangako njengalokho okwathathelwa indawo, ingaphezu kokwanele. Ukufakwa bekungekho nzima futhi kufakwe i-hardware konke bekukhona. Ukupakisha kuhle kakhulu ngombhobho ngamunye kanye nama-spigot ngawodwana agxiliwe ngakho-ke imihuzuko ekuhambeni ayenzekanga.
Umkhiqizo omuhle impela wawuseHome Depot futhi angitholakalanga owodwa engiwuthandile ngathola lokhu ku-WOWOW ngama- $ 20 angaphansi. Ukufakwa kwakulula impela futhi ngafaka amasinki ambalwa eminyakeni edlule futhi lokhu bekuyiyona elula kunazo zonke. Yonke into izwakale iqinile kakhulu, ngiyithandile impela leyo drain eza nayo engcono kakhulu kunaleyo edonsayo ngemuva kompompi. Ngingathola enye uma ngilungisa enye indlu yami yokugezela.
Ngathenga lokhu ukufaka esikhundleni sompompi wami owawukhona nowawuvuza. Kwakulula ukuyifaka. Kungithathe cishe isigamu sehora ukukhipha ompompi wakudala nemizuzu engama-20 ukufaka le entsha. Kubuye futhi ne-pop up drain, engiyithanda kakhulu. Babukeka kahle. Angiqiniseki ukuthi zizohlala isikhathi esingakanani, kodwa ngiyajabula ngokuthengwa okwamanje.